Singapore’s Ascent Invests $26 Million in Frontiir | Myanmar Business Today
HomeBusinessSingapore’s Ascent Invests $26 Million in Frontiir
BusinessFeaturedInvestment & FinanceIT & TelecomLocalMMBIZ News
Ascent Myanmar Growth Fund I LP (AMGF), Myanmar-Focused private equity fund owned by Ascent Capital Partners Pte. Ltd,aSingapore-registered fund management firm, has madeacombined $26 million minority investment in Frontiir Pte. Ltd, an internet service provider under the name Myanmar Net.
“By supporting Frontiir,aleading and trusted player in the TMT sector in Myanmar, we are furthering our commitment to makeapositive impact in the country through investing in and building successful and sustainable businesses, and ensure communities can access affordable digital solutions,” said Mr. Lim Chong Chong, Founder and Managing Partner of Ascent Capital.
The firm does not disclose the percentage of the stake it purchased from Frontiir. It just saida‘minority investment’.
Frontiir has previously received support from local and international organizations, including UK-based CDC Group, Japan’s Daiwa PI, and Delta Capital Myanmar.
Established in 2013, Frontiir provides services under the name Myanmar Net, serving 1.6 million users in over 360,000 households. It has establishedapresence in Yangon, Mandalay, Mawlamyaing, and Bago.
“The fact that Frontiir can raise capital from venerable institutions such as Ascent Capital amid the global Covid-19 pandemic isatestament to its strong business ethics and conduct, and its deep passion to create jobs and haveapositive social impact in Myanmar,” said Dr. Wai Lin Tun, Chairman and Chief Executive Officer of Frontiir.
Frontiir claimed that the COVID-19 pandemic has led toasharp increase in demand for its internet services.
In 2019’s Myanmar Digital Economy Roadmap, Myanmar’s Ministry of Planning and Finance reported 40 percent of its population were internet users. The Roadmap also aimed to increase the percentage of internet users to 45 percent by 2020, and 50 percent by 2025.
The country also has an average fixed broadband download speed of 18.0Mbps as of May 2020, which representsajump of 29.3 percent from May 2019. Although it remains far below the 2019 global average download speed of 63.85Mbps4 for fixed broadband, this growth is nevertheless notable, considering the recent liberalization of the country’s telecommunications sector in 2013.
In February this year, Frontiir was named the preferred candidate to develop cyber connectivity infrastructure for the New Yangon City project just outside Yangon. The mega project was developed by the regional government-controlled New Yangon Development Company (NYDC), who invited expressions of interest for six areas of the project’s Phase 2, and Frontiir edged out 12 other companies in the cyber connectivity area.
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ Ascent Capital Partners Pte. Ltd၏ လက်အောက်ရှိ Ascent Myanmar Growth Fund I LP (AMGF) က Myanmar Net အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုက Frontiir Pte. Ltd တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“မြန်မာနိုင်င ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ မီဒီယာကဏ္ဍက ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Frontiir မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အောင်မြင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တည်ဆောက်ခြင်းကနေ နိုင်ငံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်စေဖို့၊ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု Ascent Capital ၏ တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ Managing Partner လည်းဖြစ်သော Mr. Lim Chong Chongက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Frontiir ၏ အစုရှယ်ယာမည်မျှကို ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ “ရှယ်ယာအနည်းစုအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်” ဟုသာ ဆိုပါသည်။
Frontiir အနေဖြင့် ယခင်ကလည်း ယူကေအခြေစိုက် CDC Group၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Daiwa PI နှင့် Delta Capital Myanmarတို့ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်ငန်းများထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိထားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Frontiir သည် Myanmar Net ဟူသော အမည်ဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၆၀၀၀၀ ကျော်မှ လူပေါင်း တစ်သန်းခွဲကျော်ကို အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်နှင့် ပဲခူးတို့တွင် ဝန်းဆောင်မှုများ တိုးချဲ့ပေးနေသည်ဟုဆိုသည်။
“အခုလို COVID-19 ဖြစ်နေစဥ် ကာလအတွင်းမှာ Frontiir အနေနဲ့ Ascent Capital လိုမျိုး အထင်ကရ အဖွဲ့အစည်းဆီကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရရှိခြင်းဟာ Frontiir ရဲ့ ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ကို သက်သေပြလိုက်တာဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးဖို့၊ ကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ဖန်တီးဖို့ Frontiir ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်း ဖော်ကျူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု Frontiir ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာဝေလင်းထွန်းက ပြောသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူများ ပိုမိုသုံးစွဲလာကြသည်ဟု Frontiir က ဆိုသည်။
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာဒီဂျစ်တယ်းစီးပွားရေးလမ်းပြမြေပုံတွင် မြန်မာ့လူဦးရေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှ fixed broadband ေဒါင်းလုတ်အမြန်နှုန်းမှာ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၈ မဂ္ဂါဘိုက်ရှိသည်။ အဆိုပါအမြန်နှုန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလနှင့်ယှဥ်လျှင် ၂၉ဒသမ၃ ရာခိုင်နှန်းတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ အမြန်နှုန်းဖြစ်သည့် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၃ဒသမ၈၅ မဂ္ဂါဘိုက်ဆိုသည့် အမြန်နှုန်းနှင့်ယှဥ်လျှင် နည်းနေသေးသည်။ သို့သော် နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ဖြေလျှော့လိုက်သည်ဖြစ်ရာ ယင်းကာလအတွင်း တိုးတက်လာမှုမှာ သိသာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ(NYDC)က ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း၌ ဆိုက်ဘာဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (Cyber Connectivity Infrastructure)အတွက် Swiss Challenge ကို စတင်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနှင့်သင့်လျော်သည့်ကုမ္ပဏီ Preferred Applicant အဖြစ် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၂ ခုအနက် Frontiir ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Previous articleMyanmar Finally to EstablishaPension Fund
Next articleMyanmar to attract more FDI into the pharmaceutical sector in the future